पत्रकार बलराम बानियाँ बित्नुअघिका कुरा ...
सोमबारदेखि बल्खु खोलामा हराउनुभएका आदरणीय पत्रकार दाइ बलराम बानियाँ बुधबार मकवानपुरको माण्डु खोलामा मृत अवस्थामा फेला पर्नुभएको छ । बलराम दाइसँग लामो समयदेखि व्यक्तिगत, पेशागत तथा अन्तरंग सम्बन्ध रहनुका साथै अहिलेको घटनासँग मेरो सरोकार हो, उहाँ हराउनुअघि म र मेरो परिवारसँग रहनु ।
कोरोना संक्रमणका कारण सवारी साधनमा जोर–विजोर प्रणाली लागु भयो । बलराम दाइसँग आफ्नै साधन थिएन । उहाँ मूलपानीमा घर बनाइरहनुभएको थियो । २५ गते आइतबार दिउँसो करिव १–२ बजे मैले उहाँलाई आफ्नो गाडीमा राखेर मूलपानी लगिदिएँ ।
फर्किंदा तीनकुनेमा ल्याएर छाडिदिएँ । किनभने, मैले उपत्यका प्रहरी प्रमुख डिआइजी विश्वराज पोखरेलसँग भेट्न समय लिएको थिएँ । केही किनमेल पनि गर्नु थियो । यो कुरा बलराम दाइलाई भनेँ । तर, तीनकुनेको बागमती पुलपारी उहाँलाई छोड्न खोज्दा रिसाउनुभयो । गाडीबाट झर्न नखोजेजस्तो गरेपछि मैले ‘दाइ, झर्नुस्’ भनेँ । त्यसपछि हामीबीच हार्दिक शैलीमा केही भनाभन भयो । अन्तिममा उहाँले दिउँसो १ बजेतिरै मसँग ‘गुड नाइट’ भनेर फन्किनुभयो । भाइको नाताले उहाँले मलाई यसरी पहिला पहिला पनि घुक्र्याइरहनुहुन्थ्यो ।
म आफ्नो काममा लागेँ । तर, फेरि उहाँको फोन आउन थाल्यो । दिउँसो ३–४ बजे असापास १०–१२ पटकसम्म फोन आएको रहेछ । साइलेन्समा भएका कारण मैले उठाउन पाइनँ । मिस्ड कल देख्दा ढिलो भइसकेको थियो । त्यसैले कल ब्याक गरिनँ । साँझ साढे ७ बजे नैकापस्थित आफ्नो घर पुगँे ।
म पुग्दा त बलराम दाइ अघि नै मेरो घरमा पुग्नुभएको रहेछ । पुगेर बुहारी (मेरी पत्नी) लाई फोन गरेर घरभित्र जानुभयो । उहाँले बुहारीलाई भनेअनुसार, तीनकुनेदेखि कतै गाडी चढ्दै, कतै हिँड्दै आएको सुनाउनुभएछ ।
म घर पुग्नासाथ सोधेँ, ‘दाइ, तपाईं किन आउनुभएको ? मैले दिउँसै छोडेको हैन ? कति टेन्सन दिनुहुन्छ दाइ ?’ उहाँले नम्र भएर भन्नुभयो, ‘म आएँ भनेर तिमी रिसाउने ?’ मैले भने, ‘भाइको घर आउँदा त के भयो र दाइ, स्वागतै छ । तर, यसरी हिँडेर आउनुपर्ने थिएन नि त । मैँ ल्याइहाल्थेँ नि गाडीमा ।’ उहाँले ‘मेरो सँस्थाले मलाई डोमिनेट गर्यो । म अब तपाईंसँग काम गर्छु’ भन्न थाल्नुभयो । ‘तपाईंको यत्रो सम्पर्क छ, म पनि स्रोत जुटाउँछु, काम गरौँ‘ भन्नुभयो ।
मैले भने, ‘दाइ, म कहाँ आँट्न सक्छु र ? एउटा अनलाइन र पत्रिका चलाउँदैमा थला परिसकेँ । ल्याएको जति जम्मै बजारमा बुझाउँदा ठिक्क छ ।’ ‘अफिसले साह्रै हेप्यो, ह्युमिलियट गर्यो, म जीवन्त रहनुपर्ने मान्छेलाई…’ भन्दै उहाँ आफ्ना गुनासो सुनाउन थाल्नुभयो । मैले ‘यस्तै हो दाइ, काम गर्दा यस्तो कहिलेकाँही हुन्छ । अहिले त केही नगरौँ दाइ, दशैं–तिहारपछि सल्लाह गराँैला’ भनेँ । जनआस्थामा प्रकाशित छ । फोटो : बाह्रखरी